All important information of the STEEM user: minmin009 - STEEMIT Holmes
Accounts ID: 1002860
Accounts Name: minmin009
Voting Power: 9,237
Current Mana 28,374,579,502
Last Post 2018-07-19T23:39:39
Last Root Post 2018-07-19T23:39:39
Last Vote Time 2020-01-22T12:37:00
Vesting Reward Balance 158 VESTS
Vesting Shares 2,393 VESTS
Recieved Vesting Shares 28,324 VESTS
Curation Rewards 81
Posting Rewards 2,153
Love is green ရြာထိပ္​က​ေညာင္​ပင္​ႀကီး​ေအာက္​မွာ သူတစ္​​ေယာက္​တည္​း။ ညမိုးခ်ဳပ္​ကာနီးအခ်ိန္​မို႔ လူသြားလူလာျပတ္​ၿပီ။ ရြာကလူ​ေတြ အလုပ္​သိမ္​းျပန္​ၾကတာ မၾကာလွ​ေသး...။ၾကက္​သြန္​ခင္​း​ေဆးျဖန္​းျပန္​လာတဲ့ ထြန္​းခင္​နဲ႔​ေတာင္​ အခုနကမွ ဆံုလိုက္​​ေသးသည္​။ ” ဟ​ေရာင္​့ ဖိုး​ေက်ာ္​ မျပန္​​ေသးဘူးလား ” ​ေမးလို႔ ​ေခါင္​းရမ္​းျပလိုက္​​ေသး။​ေဆးျဖန္​းပံုးႀကီး လြယ္​ထားတဲ့သူ႔ကို ဘယ္​သူက သံသယျဖစ္​မွာတဲ့လဲ ။ သူ ရြာအဝင္​လမ္​းကို ​ေမွ်ာ္​ၾကည္​့မိသည္​။ ဒီ​ေန႔မွ ခင္​​ထားေနာက္​က်လြန္​းလွပါလား....။ လကုန္​ရက္​တိုင္​း အျပ ... more
2018-06-04 14:18:12 Block Num: 23,029,380
မှတ်မှတ်ရရ သည်ရပ်ကွက်ထဲကို သည်လူကြီး ပြောင်းလာတဲ့ နေ့က ခွေးနီတို့ အိမ်မှာလဲ အပျော်လွန်ပြီး ဝုန်းဒိုင်းကြဲနေတဲ့ နေ့။ ခွေးနီ အိပ်ရာက လန့်နိုးလာတော့ အိမ်ပေါ်မှာ မမ သူငယ်ချင်းတွေ ဆယ်ယောက်ထက် မနည်း။ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် အလုအယက် အပြိုင်အဆိုင် အော်ဟစ်ပြောဆို နေကြသော စကားသံတွေ ကလည်း တရစပ်။ နားထောင်သူ မရှိ။ ပြောသူချည်း ဖြစ်နေကြ၏။ အဲသည် ကြားထဲမှာ အမေက သကာရည် လောင်းထားသော မျက်နှာဖြင့် ခြေမကိုင်မိ၊ လက်မကိုင်မိ၊ နောက်ဖေး ဝင်လိုက် အိမ်ရှေ့ ထွက်လိုက်ဖြင့် ယောင်တောင် ပေါင်တောင် ဖြစ်နေလေ၏။ ပြီးတော့မှ ခွေးန ... more
2018-06-03 02:37:27 Block Num: 22,986,567
Sociedad Radiodifusión Interamericana
1945 hkunhaittwin kolanbheyar laitbharaal parteninenganrayysamarrmyarr Cesar Garcia, Jorge Soto del Corral, luu Uribe Piedrahita, Alberto Arango Tavera, karr lhoet it Sanz Santamaría hosayy go maat jPinzón, aaall hpwan so jya Pumarejo nhaint aaall hpwan so jya Michelsen aasopar Emisora ​​Nuevo Mundo hpaanteelo Sociedad Radiodifusión Interamericana, created go tar twin . hcaattainbharl31948 twin,, La Voz k de Antioquia Emisora ​​Nuevo Mundo eat 50% rashihkaesai . Caracol tararrwain 1959 ... more
2018-05-31 23:18:42 Block Num: 22,925,031
mahchcatar tait u k suu shalyarnhuann $ 400 mhar aahcushalyar waalyuu hkyinn nhaint hc tot shalyar jhayynhuann waalyuu raathcwal nhaint aahkwinaarayymyarr ko htotepayy hkae pyeesaw mhar raathcwalakyarr m pyaungg hkaebhuu kyaunggko yuus, $ 40,000 hcuhcupaungg rainnnhaeemyahuutnhaanmhumharkumpane X ko 100 shalyar shihkaepartaal . 1 yuusarain: $ 200 eat kamlhammhu taithku hcyaayynhuannmhar 1 subscription ko aahkwinaarayy sinerar pyaဿnar mahchcatar tait u k suu kamlhamhkyetko hcyaayynhuann ... more
2018-05-29 13:12:39 Block Num: 22,855,320
လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၈၀ နီးပါး မြန်မာပြည် အင်္ဂလိပ်အုပ်စိုးစဉ်ကာလ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ရွာတစ်ခုက မိတ်ဆွေနှစ်ဦးဟာ လှေတစ်စီးနဲ့ တောထဲ သစ်ခုတ်သွားခဲ့တယ်။ အဲဒီတုန်းအခါက ဒီရေတောတွေဟာ ကနစိုလို အပင်ကြီးတွေ ကျားလိုသားရဲတွေပေါလှပြီး အဖော်မပါရင် သွားရဲဖို့မလွယ်တဲ့ မဲမဲမှောင်မှောင် တောနက်ကြီးတွေပေါ့လေ။ အတိုချုံ့ပြောရရင် လိုချင်တဲ့ သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ကို နှစ်ယောက်သား ဓားရာပေး၊ လွှနဲ့တိုက်ပြီးခုတ်လှဲတဲ့အခါ လဲကျလာတဲ့ သစ်ပင်ဟာ အခန့်မသင့်ပဲ လည်သွားပြီး ပေါင်ရင်းလောက်ရှိတဲ့ သစ်ကိုင်းကြီးတစ်ဖက်က တစ်ယောက်သောသူရဲ့ နံဘေးကို ပ ... more
2018-05-21 18:49:48 Block Num: 22,632,073
t u taee i pyaဿnar aapaw yuu nineparsai aamyarraapyarr aamyinmyarr shinayparsai . aamyat wainngway aanote konekyahcarate nyemyaha pyee kataeek pahtam u sone, t u taeeko output eata saint lotesaunghkyetmyarrkoaahpyit variable twayko wainngway nhaint konekyahcarateeat graphicallyeach kyaanhcai hkyinn nhang hkyarrnarrhkyet kaungg lartarparsaw output ko aasaint ko twaepar ( shoetmahote i taanhpoemyarr ko tait hcarr pwal aahcarr tait g raut twaynae lotesaung ninepartaalninepartaal ) . tikyata ... more
2018-05-20 23:03:15 Block Num: 22,608,344